အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်) – A one
အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၁၉ ချက်ကို ၃၀ ပြည့်စ၊ ကျော်စ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖို့ ပါ။
၁။ ဆေးလိပ် မသောက် ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်သောက်တတ် သူဆို ရင်လည်း ချက်ချင်းဖြတ် ဖို့ကြိုးစား ပါ။ပိုက်ဆံ ကုန်တယ်၊ အနံ့ဆိုး တယ်၊ ရောဂါရဖို့ ၁၀၀%နှုန်းပြည့် သေချာ တယ်။ ဆေးလိပ်သောက် တာကို ခုပဲ ရပ်လိုက် သင့် ပါပြီ။
သင့်ရဲ့အသားအရေမှာ နေလောင် ဒဏ်တွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေ အဖုအပိန့်တွေ မဖြစ်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ UV ခရင်မ် တစ်ခုခုကို စလိမ်းဖို့ လို ပါပြီ။
၃။ ပိုက်ဆံ စစုပါ။
နည်းတာ များတာ ပဓာန မဟုတ်ပါ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အကြံပြု ချက်ကြီး လို့ထင်စရာပါ။ဒါပေမယ့် အသက်သုံးဆယ် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရှိတဲ့ ဝင်ငွေ ထဲက နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စုဆောင်းထားတတ်တဲ့ အကျင့် လုပ်ထားခြင်းဟာ အနာဂတ် အတွက် အာမခံချက် တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေ ခြင်းပါပဲ။
၄။ မိဘတွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းကို တည်ဆောက်ပါ၊ မကောင်းရင်ပြင်ဆင်ပါ။သင့်မိဘတွေ၊ မွေးချင်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တောင် သူတို့တွေနဲ့ လိုက်လျော ညီတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။မိသားစု သံယောဇဉ် ဆိုတာ ဘဝမှာ အင်မတန်ကို အရေးပါ ပါတယ် ။ မိသားစု ဆိုတာ သင့်ဘဝမှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အရာဆိုတာ အနှေးနဲ့အမြန် ဆိုသလို သင်သိ လာပါ လိမ့်မယ်။
၅။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ အစား အမှတ်တရတွေကို စုဆောင်း သိမ်းဆည်းပါ။ဘဝတစ်ခု ဆိုတာ အတွေ့အကြုံတွေ အမှတ်တရတွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတာပါ။ အသက် ငါးဆယ်လောက်ကျမှ “ငါ့ဘဝမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ပဲစုဆောင်းမိ ခဲ့ပြီး အမှတ်တရဆိုလို့ ဘာမှမရှိ၊ ဗလာနတ္ထိ ဘဝကြီး ပါလား” ဆိုပြီးနောင်တ မရချင် ပါနဲ့။အမှတ်တရဖြစ်ရပ်တွေ ဆိုတာ ဟောင်းသွားလို့ တန်ဖိုးကျ တယ်တို့၊ မီးလောင်လို့ပျက်စီး သွားတယ်တို့ လုံးဝ မရှိ ပါဘူး။
၆။ လောကကြီးကို တစ်ခုခုပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားပါ။သူတပါး အကျိုးကို ဆောင်ရွက် လိုက် ရခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ် မိမိ လူကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ် ထင်မြင်လေးစားမှု ရရှိစေ ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတပါး အတွက်ပေးကမ်း ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါ ဘာအကျိုးအမြတ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးဖို့ နဲ့ တကယ့်ရင်ထဲ နှလုံးထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ လိုပါ လိမ့်မယ်။
၇။ အားကစားလိုက်စားပါ။သွက်လက်တဲ့ ဘဝပုံစံမျိုးကို အခုပဲ စတင် တည်ဆောက် လိုက်ပါ။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန် လုပ်ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို သင့်အသက် ငါးဆယ် ဝန်းကျင် ကျရင် သိသိသာသာ ခံစားရ ပါလိမ့် မယ်။ကိုယ်အလေး ချိန်ကို ထိန်းပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက် ရမယ့် အရွယ်ရောက် လာပါပြီ။
၈။ ဘဝမှာရောင့်ရဲတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်သင်ယူပါ။တစ်ကိုယ်ရေပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ လူသိများပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ထက်ပိုအရေးကြီး ပါတ ယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှလေးနဲ့ရောင့်ရဲတတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မီလီလျံနာကြီး မဖြစ်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်တဲ့လူသား တစ်ဦးတော့ဖြစ်စေမှာ သေချ ာပါတယ်။မီလီလျံနာ သူဌေးကြီး ဖြစ်လာရင်လည်း အောက်ခြေ မလွတ်တဲ့၊ ဘဝကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ရတဲ့ သူဌေးကြီးဖြစ်လာ ပါလိမ့် မယ်။
၉။ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်မစောင့် ပါနဲ့တော့။အိမ်တစ်လုံးလောက် ဝယ်ချင်နေ လား ? အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးတွေ ယူဖို့ စိတ်ကူးနေလား?စာအုပ်တစ်အုပ် လောက်ရေး ချင်နေလား ? မဟာဘွဲ့တစ်ခုခု ယူဖို့စိတ်ကူးနေလား? အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း အသစ် တစ်ခု စချင်ပြီလား ? တူရိယာတစ်ခုခု တီးမှုတ် တတ်ဖို့ လေ့လာချင် နေလား? ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ထောင်ချင် နေလား?
ဒီနေ့ပဲ သင့်အိမ်မက်ကို အကောင်အထည် စဖော်ပါတေ “တစ်နေ့နေ့တော့စ ကို စမယ်ကွ” ဆိုပြီးနေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်ရတာ လွယ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသက်သုံးဆယ် နောက်ပိုင်းရောက်လာရင် အချိန်က အရင်က ထက် အကုန်မြန်တော့မှာ။ဟိုလှည့်သည် လှည့်နဲ့ လေးဆယ် ငါးဆယ် ရောက်သွားမှာ။ သင့်အိမ်မက်တွေကို မဖြစ်မနေစတင်ရမယ့်အချိန်ဟာ သည်နေ့ သည် ချိန်ပါပဲ ။
အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မရှိတဲ့၊ မှောင်ပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း အိပ်စက်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာ ဖုန်းမပွတ် ပါနဲ့။ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲ ပါလိမ့် မယ်။ အိပ်ချိန်နဲ့ ထချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ထားပြီး အချိန်မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန် ထဖို့ လေ့ကျင့်ပါ။
၁၁။ သွားကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက် ပါ။
သွားဆေးခန်းမှာ သင့်သွားနဲ့ခံတွင်းကို အခုပဲ စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးနေတာတွေ ရှိရင် အခု ကတည်းက ပြင်ဆင် ဖာထေး လိုက်ပါ။ သွားကျန်းမာရေး ဆိုတာ ဂရုမစိုက်ပဲထားရင် သူ့ဟာသူ ပြန်ကောင်းသွားတယ်လို့ ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။
သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှုတွေက ဈေးကြီးတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကုမဖြစ်အခြေအနေကျမှ ဆေးခန်းသွားရင် အဆပေါင်းများစွာ ပိုကုန်သလို ပိုလည်း နာပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ထဲကနေ ထွက်ပြီး ခရီးတွေ သွားဖို့ ခုပဲပြင်ဆင် ပါတော့။ သင်သွာ းနိုင်သမျှ ဝေးဝေးနဲ့ သင်တတ်နိုင်သမျှ ထူးခြား ဆန်းပြားတဲ့ နေရာတွေ ဆီကို ခရီးထွက်ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီ းရိုက်ပါ။ စွန့်စွန့်စားစား သွားရမယ့် နေရာတွေ အထိသွားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သင်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး သူတစ်ယောက်ကို ခရီးဖော် အဖြစ် ခေါ်သွားပါ။ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီး လိုက်ပါ။ သင်အသက်ကြီး လာတဲ့အခါ ဒီခရီးတွေ အကြောင်းပြန်တွေးပြီးပြုံးနေပါလိမ့်မယ်။
၁၃။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသောက်ပါ။
သင့်မှာပိုက်ဆံတွေ ရှိလွန်းလို့ တစ်ကမ္ဘာံလုံး ကိုဝယ်ရင် ဝယ်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေး ဆိုတာ ဝယ်ယူလို့ မရပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အသက်သုံးဆယ် ကနေစပြီး ရှောင်ရှားပါ။
လူတစ်ကိုယ် လုံးမှာ သေတဲ့ အထိဖွံ့ဖြိုးကြီးထွာ းနိုင်တဲ့အရာဟာ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာ သာဖြစ် ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကြီးထွာ းဖွံ့ဖြိုးအောင် စာကောင်းပေမွန်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးပါ။
၁၅။ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုကို သင်ယူလေ့ကျင့်ပါ။
စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာ အနန္တပါ။ ပြောလို့ မကုန် ပါဘူး။ သင့်ဘက်က ရင်းနှီးရမှာ ဆိုလို့ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်နည်းနည်းလေး ရယ်ပါ။စိတ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက် လာတာနဲ့ အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူတွေ ကတောင် သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲ မှုကိုသတိထား မိလာကြ ပါလိမ့် မယ်။
၁၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့တော့။
သူများတွေကိုယ့်ကို အထင်ကြီးမကြီး ဆိုတာ အရေးမပါမှန်း သင့်အသက် ၅၀ လောက်ကျ ရင် သင်သိလာပါ လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ် ခိုင်ခိုင်မာမာ လျှောက် ပါ။
၁၇။ ဒိုင်ယာရီရေးတဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ။
ဘဝထဲက အမှတ်တရဖြစ်ရပ် အချို့ဟာ သင်သတိတရနဲ့ ရေးမှတ် ထားတာမျိုး မလုပ်ရင် တစ်ချိန်ကျမေ့ သွားတတ် ပါတယ်။
အသက်ကြီး လာတဲ့ အခါ ဘဝအမှတ်တရလေးတွေ စုစည်းရေးမှတ် ထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီလေး ကိုပြန်ဖတ်ရတာ ဖျော်ဖြေမှု တစ်မျိုးပဲပေါ့။
Memory stick လေးနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အားလုံးကို သိမ်းဆည်း ထားပါ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေက ကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်။
၁၈။ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် ဂရုတစိုက် ရှိပါ။
ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး၊ ရင်ဘတ်ချင်း အနီးဆုံး သူငယ်ချင်း ကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင်းပါ။သူတို့နဲ့အတူ ဘဝကို နိမ့်မြင့်မဟူ အတူတူဖြတ်သန်းပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ပါစေနဲ့။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ခါတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်၊ စကားစမြည်ပြောပါ။
၁၉။ ကိုယ်ပိုင် အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ယူပါ။
လူတော်တော် များများ အတွက်တော့ ဒီအရာဟာ လက်ရှိအခြေအနေအရ မလွယ်ကူ နိုင်ပါဘူ း။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တာရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ အနားယူဖြေဖျောက် နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး တတ်နိုင် သမျှကြိုးစား ပါ။အိမ်တစ်လုံးကို အသက်၃၀မှာ အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ် ဆိုရင် သင့်အသက် ၅၀ဆို သင်ဟာ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်နဲ့ဖြစ်နေဖို့ သေချာ သလောက် ရှိပါတယ်။
အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ္ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမွ်တ တဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၁၉ ခ်က္ကို ၃၀ ပြည့်စ၊ ကျော်စ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖို့ ပါ။
သင့်ရဲ့အသားအရေမှာ နေလောင် ဒဏ်တွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေ အဖုအပိန့်တွေ မဖြစ်ချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ UV ခရင်မ် တစ္ခုခုကို စလိမ်းဖို့ လို ပါပြီ။
၃။ ပိုက္ဆံ စစုပါ။
နည်းတာ မ်ားတာ ပဓာန မဟုတ်ပါ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အကြံပြု ချက်ကြီး လို့ထင်စရာပါ။ဒါပေမယ့် အသက်သုံးဆယ် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရှိတဲ့ ဝင်ငွေ ထဲက နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စုဆောင်းထားတတ်တဲ့ အကျင့် လုပ်ထားခြင်းဟာ အနာဂတ် အတွက် အာမခံချက် တစ္ခုကို တည်ဆောက်နေ ခြင်းပါပဲ။
၄။ မိဘေတြ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းကို တည်ဆောက်ပါ၊ မကောင်းရင်ပြင်ဆင်ပါ။သင့်မိဘတွေ၊ မွေးချင်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တောင် သူတို့တွေနဲ့ လိုက်လျော ညီတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုအပ် ပါတယ်။
မိသားစု သံယောဇဉ် ဆိုတာ ဘဝမွာ အင်မတန်ကို အေရးပါ ပါတယ် ။ မိသားစု ဆိုတာ သင့်ဘဝမှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အရာဆိုတာ အနှေးနဲ့အမြန် ဆိုသလို သင်သိ လာပါ လိမ့်မယ်။
၅။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ အစား အမွတ္တရေတြကို စုဆောင်း သိမ်းဆည်းပါ။
ဘဝတစ္ခု ဆိုတာ အတွေ့အကြုံတွေ အမှတ်တရတွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတာပါ။ အသက် ငါးဆယ်လောက်ကျမှ ငါ့ဘဝမွာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ပဲစုဆောင်းမိ ခဲ့ပြီး အမှတ်တရဆိုလို့ ဘာမွမရွိ၊ ဗလာနတ္ထိ ဘဝကြီး ပါလား ဆိုပြီးနောင်တ မရချင် ပါနဲ့။အမှတ်တရဖြစ်ရပ်တွေ ဆိုတာ ဟောင်းသွားလို့ တန္ဖိုးက် တယ်တို့၊ မီးလောင်လို့ပျက်စီး သွားတယ်တို့ လုံးဝ မရွိ ပါဘူး။
သူတပါး အကျိုးကို ဆောင်ရွက် လိုက် ရခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ် မိမိ လူကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ် ထင်မြင်လေးစားမှု ရရှိစေ ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတပါး အတွက်ပေးကမ်း ဆောင်ရွက်တဲ့ အခါ ဘာအကျိုးအမြတ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးဖို့ နဲ့ တကယ့်ရင်ထဲ နှလုံးထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ လိုပါ လိမ့်မယ်။
သွက်လက်တဲ့ ဘဝပုံစံမျိုးကို အခုပဲ စတင် တည်ဆောက် လိုက်ပါ။ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန် လုပ်ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို သင့်အသက် ငါးဆယ် ဝန်းကျင် ကျရင် သိသိသာသာ ခံစားရ ပါလိမ့် မယ်။ကိုယ်အလေး ချိန်ကို ထိန်းပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက် ရမယ့် အရွယ်ရောက် လာပါပြီ။
တစ်ကိုယ်ရေပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ လူသိများပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ထက်ပိုအရေးကြီး ပါတ ယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှလေးနဲ့ရောင့်ရဲတတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မီလီလျံနာကြီး မဖြစ်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်တဲ့လူသား တစ်ဦးတော့ဖြစ်စေမှာ သေချ ာပါတယ်။မီလီလျံနာ သူဌေးကြီး ဖြစ်လာရင်လည်း အောက်ခြေ မလွတ်တဲ့၊ ဘဝကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ရတဲ့ သူဌေးကြီးဖြစ်လာ ပါလိမ့် မယ်။
၉။ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်မစောင့် ပါနဲ့တော့။အိမ်တစ်လုံးလောက် ဝယ်ချင်နေ လား ? အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးတွေ ယူဖို့ စိတ်ကူးနေလား?စာအုပ်တစ်အုပ် လောက်ရေး ချင်နေလား ? မဟာဘွဲ့တစ်ခုခု ယူဖို့စိတ်ကူးနေလား? အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း အသစ် တစ္ခု စချင်ပြီလား ? တူရိယာတစ္ခုခု တီးမှုတ် တတ်ဖို့ လေ့လာချင် နေလား? ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခု ထောင်ချင် နေလား?
ဒီနေ့ပဲ သင့်အိမ်မက်ကို အကောင်အထည် စဖော်ပါတေ တစ်နေ့နေ့တော့စ ကို စမယ္ကြ ဆိုပြီးနေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်ရတာ လွယ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသက်သုံးဆယ် နောက်ပိုင်းရောက်လာရင် အချိန်က အရင်က ထက် အကုန်မြန်တော့မှာ။ဟိုလှည့်သည် လှည့်နဲ့ လေးဆယ် ငါးဆယ် ရောက်သွားမှာ။ သင့်အိမ်မက်တွေကို မဖြစ်မနေစတင်ရမယ့်အချိန်ဟာ သည်နေ့ သည် ချိန်ပါပဲ ။
အလင်းရောင်စူးစူးတွေ မရွိတဲ့၊ မှောင်ပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း အိပ်စက်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာ ဖုန်းမပွတ် ပါနဲ့။ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲ ပါလိမ့် မယ်။ အိပ်ချိန်နဲ့ ထချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ထားပြီး အချိန်မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန် ထဖို့ လေ့ကျင့်ပါ။
အိမ်ထဲကနေ ထွက်ပြီး ခရီးတွေ သွားဖို့ ခုပဲပြင်ဆင် ပါတော့။ သင်သွာ းနိုင်သမျှ ဝေးဝေးနဲ့ သင်တတ်နိုင်သမျှ ထူးခြား ဆန်းပြားတဲ့ နေရာတွေ ဆီကို ခရီးထွက်ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီ းရိုက်ပါ။ စွန့်စွန့်စားစား သွားရမယ့် နေရာတွေ အထိသြားပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သင်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး သူတစ်ယောက်ကို ခရီးဖော် အဖြစ် ခေါ်သွားပါ။ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အမွတ္တရေတြ ဖန္တီး လိုက်ပါ။ သင်အသက်ကြီး လာတဲ့အခါ ဒီခရီးတွေ အကြောင်းပြန်တွေးပြီးပြုံးနေပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ကိုယ် လုံးမွာ သေတဲ့ အထိဖွံ့ဖြိုးကြီးထွာ းနိုင်တဲ့အရာဟာ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာ သာဖြစ် ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကြီးထွာ းဖွံ့ဖြိုးအောင် စာကောင်းပေမွန်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးပါ။
၁၅။ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း တစ္ခုခုကို သင်ယူလေ့ကျင့်ပါ။
စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာ အနန္တပါ။ ပြောလို့ မကုန် ပါဘူး။ သင့်ဘက်က ရင်းနှီးရမှာ ဆိုလို့ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်နည်းနည်းလေး ရယ်ပါ။စိတ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက် လာတာနဲ့ အမွ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွိတဲ့ လူတွေ ကတောင် သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲ မှုကိုသတိထား မိလာကြ ပါလိမ့် မယ်။
Memory stick လေးနဲ့ အမွတ္တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အားလုံးကို သိမ်းဆည်း ထားပါ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေက ကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်။
၁၈။ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် ဂရုတစိုက် ရွိပါ။
ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံး၊ ရင်ဘတ်ချင်း အနီးဆုံး သူငယ်ချင်း ကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင်းပါ။
သူတို့နဲ့အတူ ဘဝကို နိမ့်မြင့်မဟူ အတူတူဖြတ်သန်းပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ပါစေနဲ့။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ခါတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်၊ စကားစမြည်ပြောပါ။
၁၉။ ကိုယ်ပိုင် အိမ္တစ္လုံး ဝယ်ယူပါ။
လူတော်တော် မ်ားမ်ား အတွက်တော့ ဒီအရာဟာ လက်ရှိအခြေအနေအရ မလြယ္ကူ နိုင်ပါဘူ း။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တာရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ အနားယူဖြေဖျောက် နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး တတ်နိုင် သမျှကြိုးစား ပါ။အိမ္တစ္လုံးကို အသက်၃၀မှာ အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ် ဆိုရင် သင့်အသက် ၅၀ဆို သင်ဟာ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်နဲ့ဖြစ်နေဖို့ သေချာ သလောက် ရှိပါတယ်။